Qiimaha iyo astaamaha iPad Pro-ka cusub ee maanta la soo bandhigay | Waxaan ka socdaa mac
Waxay ka badneyd hal jeer tan iyo markii la soo afjaray muhiimada koowaad ee Apple sanadkan, runta ayaa ah inaysan naga niyad jabin haba yaraatee. Waxaan ugu dambeyntii aragnay Jon Prosser oo ku riyooday AirTags, laakiin shaki la'aan, tan ugu caansan ee soo bandhigista waxay ahayd iMac cusub iyo iPad Pro oo leh qalabka M1.
Marka hadda deggan, waxaan dib u eegeynaa si faahfaahsan astaamaha iPad-kan cusub, iyo kan qiimaha rasmiga ah ee Spain noocyadeeda kala duwan. U tag.
Apple waxay soo saartay iPad Pro cusub sannadkii hore, sanad iyo badh ka dib cusbooneysiintii hore, laakiin isbedel weyn ma ahayn. Waxay ahayd wax fudud oo ganacsi "restyling" ah oo ka badan wax kasta oo kale. Qayb kamarad cusub ah oo ay kujiraan LiDAR iyo kamaradda Ultra Wide, laakiin iPadku runtii ma ahan aalad loogu talagalay in lagu qaado sawirro waaweyn. Processor-ka waxaa loo casriyeeyay A12Z, kaas oo lamid ahaa A12X, laakiin leh hal GPU core, oo ku naafoobay A12X, ayaa dib loo howlgaliyay. Waxay laheyd keyd dheeri ah, laakiin taasi waa shaqadii socodkii lama huraanka ahaa ee waqtiga. Kaalay, Cupertino wax badan kuma dilin noocaas iPad Pro.
Laakiin shaki la'aan hadda waa inaad koofiyaddaada u qaaddaa kooxdii ka shaqaysay horumarinta kan cusub jiilka shanaad iPad Pro. Chapeau!
1 IPad-kii ugu horreeyay ee Apple Silicon
2 Iyada oo 12,9-inch mini-LED bandhigay
3 Xiriiro cusub oo horumarsan
4 Kaamirada hore ee 12MP
5 Habka LTE oo leh 5G
6 Qiimaha iyo helitaanka
IPad-kii ugu horreeyay ee Apple Silicon
Ipad-kii ugu horreeyay ee xilligii Apple Silicon oo leh processor M1.
Aynu raacno warka. IPad-ka cusub ee cusub wuxuu si rasmi ah ugu biirayaa qalabka Silicon Apple, maaddaama ay ku dheggan tahay processor-kii hore loo yaqaan ee M1 ee horeyba ugu uruuray dib u eegisyo aad u fara badan oo wanaagsan Apple Silicon oo la bilaabay dhammaadkii sanadkii hore.
El M1 asal ahaan waa wixii aan ka filan lahayn A14X - waa sida A14 oo leh laba jibaar waxqabadka sare (4 halkii 2), laba jibaar dhexda GPU badan (8 halkii 4), iyo labalaabka baaska. xusuusta (128-bit halkii 64-bit). Haddii horey loogu qaabeeyey M1, looma baahna in waqti lagu lumiyo processor-ka cusub ee A-series.
Marka lagu daro processor-ka aadka u dheereeya iyo sawirada, helitaanka keydinta ayaa laba jibaar ka dhaqso badan iPad Pro-kii ugu dambeeyay, waxaana lagu heli karaa ilaa 2 TB kaydinta Moodooyinka leh wax ka yar 1 TB kaydinta, iPad Pro wuxuu la yimaadaa 8 GB oo RAM ah. Moodooyinka leh 1TB ama 2TB ee kaydinta, waxay ku timaadaa 16GB RAM. Ku dhowaad waxba.
Iyada oo 12,9-inch mini-LED bandhigay
Muuqaalka MiniLED ee nooca 12,9-inji.
Labada nooc ee iPad Pro, oo ah 11-inji iyo 12,9-inji oo ah iPad Pro ayaa leh aaladaha LED-ka oo leh 264-pixel-per-inch xal ah, True Tone, iyo taageerada 120Hz ProMotion. iftiin cusub mini-LED taas oo ku siinaysa isbarbardhig wanaagsan.
Waxaa loo yaqaan Dareeraha dareeraha XDR, oo aad ula mid ah kormeeraha horay loo yaqaan 'Pro Display XDR'. Waxaad heleysaa 1000 nits oo dhalaal ah iyo 1600 nits oo dhalaalka ugu sareeya ah, 1.000.000: 1 saamiga isbarbar dhiga, iyo taageerada qaabab kala duwan oo HDR ah. Dhammaan shaashad xirfad leh oo ku jirta iPad-ka.
Xiriiro cusub oo horumarsan
Dib u qaabeynta weyn ee iPad Pro 2018, Apple wuxuu ku badalay dekedda hillaaca ee iPad Pro kumbuyuutar USB Type-C ah.Tani waxay siisay awood ay si fudud ugu xirmi karto bakhaarada dibedda, kamaradaha, iyo qalabyada kale.
Moodooyinka cusubi waa la jaan qaadi karaan qaylo 3 y USB4, taas oo macnaheedu yahay inay taageeraan dhammaan qalabyada u hoggaansamaya USB-C ee jira, iyo sidoo kale qalabka Thunderbolt sida qalabka xawaaraha sare ee dibadda iyo kormeerayaasha xallinta sare. Waxay xitaa kuxirantahay Pro Display XDR xalka buuxa. Horumar weyn oo looga faa'iideysto fursadaha iPad-ka.
Kaamirada hore ee 12MP
Kamarad hore oo leh qaab toos ah.
Jiilka cusub ee iPad Pro ayaa leh isla kamaradaha gadaal marka loo eego qaabkii sanadkii hore: f / 1.8 12MP Wide iyo f / 2.4 10MP Ultra Wide camera, oo lagu daray dareemayaal LiDAR. Laakiin kaamirada hore waxaa lagu badalay kamarad cusub oo 2.4MP f12 ah oo aad u balaaran oo leh aragti 122-degree ah.
Muuqaal cusub oo FaceTime ah oo qabow ayaa loo yaqaan «Xarunta Stage»Waxay ku keentaa inay si toos ah" u qaabeyso "una soo dhaweyso si ay kuugu hayso bartanka shaashadda adigoo bidix ama midig u dhaqaaqaysa. Faa'iido leh haddii aad sameysid wicitaanno fiidiyoow adigoo gacanta ku haysta iPad-ka.
Ka shaqeynta muuqaalka wanaagsan ee processor-ka M1 wuxuu ku siin doonaa natiijooyin wanaagsan sawirrada iyo fiidiyowyada inkasta oo ay leeyihiin kamarad gadaal oo la mid ah tii hore.
Habka LTE oo leh 5G
Tani way cadahay. Waxay ku kici doontaa injineerada Cupertino wax yar si ay ula qabsadaan modemka 5G laga bilaabo hadda iPhone 12 illaa iPad Pro cusub. Xiriir LTE ah oo u dhigma waxqabadka iPad-ka cusub. Wax intaas ka badan oo lagu soo kordhin karo ma jiro. Waxay ahayd khaanad.
11-inch iPad Pro waxaa lagu qiimeeyaa qaabkii sanadkii hore - laga bilaabo 879 Euros midka leh 128 GB oo keyd ah oo leh Wi-Fi oo keliya. Habka Wi-Fi + Cellular wuxuu ka bilaabmayaa 1.049 5, xoogaa ka qaalisan qaabkii sanadkii hore, qiimaha modemka XNUMXG awgood.
Qaabka 12,9-inji wuxuu arkay qiimo koror, sababtoo ah muuqaalka cusub ee Liquid Retina XDR. Waxay ka bilaabaneysaa 1.199 Euros oo leh 128GB oo kayd ah oo ku saabsan qaabka Wi-Fi. Wi-Fi + Cellular wuxuu u socdaa ilaa 1.369 Euros oo leh keydka ugu yar ee 128 GB.
Amarada waxaa laga aqbali doonaa websaytka Apple iyo dukaamadiisa laga bilaabo Abriil 30, oo bilaabi doona rarka qeybtii labaad ee Maajo, oo aan weli maalin cayiman lahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Qiimaha iyo astaamaha iPad Pro cusub
Ma hubtaa in kamaradda hore la saaray cirifka dheer? Waxaan dhihi lahaa maya, inay wali ku jirto isla meeshii had iyo jeer.
Waad saxantahay Waan ka cudurdaaranayaa oo aan tifaftiraa qoraalka.
Ka dib markii la dhammeeyo "Gugga la shubay" macOS Big Sur 11.3 Musharax Siideyn ayaa la sii daayay